Politika · Desambra, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Politika · Desambra, 2018
Tantara mikasika ny Politika tamin'ny Desambra, 2018
Ny Alahady 23 Septambra 2012 ny fifidianana parlemantera tany Belarosia, fa efa nanomboka sahady ny fifidianana mialoha, ary mety ho avo be ny fandraisana anjara amin'ny farany, na nisy aza ny antso hanao ankivy ilay fifidianana.
Ejipta: Nidal Hassan – Mpitsabo Aretin-tsaina sa Marary Saina?
Mpitsabo aretin-tsaina ao amin'ny tafika Amerikana izay teratany Arabo ny Major Nidal Hassan izay nanao ilay fitifirana faobe tao Fort Hood tao Texas, namonoany miaramila 12 ary olontsotra iray. Miatrika fiampangana mikasika vonoolona nokasaina izy ankehitriny. ''Mpitsabo Aretin-tsaina sa Marary Saina?'', hoy ireo blaogera Ejiptiana manontany.
Azia Atsinanana 31 Desambra 2018